Galmudug oo Puntland ku eedeysay in ay taageero siiso Ahlusunna Waljamaaca – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
MAREEG 18 August 2015
Cadaado ( Mareeg)-Madaxweyne ku xigeenka Maamulka Puntland Max’ed Xaashi Carabeey oo u warramayay Idaacadda BBC-da Laanteeda afka Soomaaliga ayaa sheegay in maamulka Puntland uu colaad ka hurinayo deegaanada Galmudug.
Max’ed Xaashi ayaa carabka ku adkeeyay in Puntland ay taageero dhinacyo kala duwan ah ay siineyso Culumaa’udiinka Ahlusunna Waljamaaca ee Gobollada dhexe.
Isagoo sii wata hadalkiisa ayuu Madaxweyne ku xigeenka Galmudug carabka ku dhuftay in ay isku dayeen in ay la hadlaan Ahlusunna Waljamaaca laakiin isku dayadooda ay hagal daaciyeen fara gelin uu sheegay in ay ka imaaneyso dhanka Puntland.
Dhinaciisa Wasiirka Warfaafinta Maamulka Puntland Max’ud Xasan Soocade ayaa iska fogeeyay eedaha sheegaya in ay Puntland taageerto Ahlusunna wuxuuna sii xoojiyay in maamulkooda uusan aqoonsaneen Maamulka Galmudug ee lagu dhisay Cadaado balse ay aqoonsan yihiin Culumaa’udiinka Ahlusunna Waljamaaca isagoona ku eedeeyay Galmudug qudheeda in ay colaad ka hurineyso deegaanno ay ka mid tahay saaxo iyo kuwa kale oo loo baahnaa in nabad ay kuwada noolaadaan dadka walaalaha ah ee wada dega.